Umkhiqizo wochungechunge lwe-HUAJING synthetic mica usebenzisa isimiso sokuncibilika kwe-crystallization ekushiseni okuphezulu. Ngokuya ngamakhemikhali wemvelo nokwakheka kwangaphakathi, okukhiqizwa ngemuva kokushisa kwe-electrolysis kanye nokuncibilika ekushiseni okuphezulu, ukupholisa kanye ne-crystallization, khona-ke i-mica yokwenziwa ingatholwa. Lo mkhiqizo unezinzuzo zobumsulwa obuphakeme nobumsulwa, okuqukethwe yensimbi okuphansi kakhulu, akukho zinsimbi ezisindayo, ukumelana nokushisa, ukumelana ne-alkali ukumelana ne-asidi, futhi futhi kuyamelana nokugqwala kwegesi eyingozi, ukusebenza okuzinzile nokufakwa kahle.
200HC Mhlophe ＞ 96 60 .9 99.9 ＜ 20 ＜ 0.5 ＜ 0.1 7.6 Cha Cha 0.25
400HC Mhlophe ＞ 96 45 .9 99.9 ＜ 20 ＜ 0.5 ＜ 0.1 7.6 Cha Cha 0.22
600HC Mhlophe ＞ 96 25 .9 99.9 ＜ 20 ＜ 0.5 ＜ 0.1 7.6 Cha Cha 0.15
1250HC Mhlophe ＞ 96 15 .9 99.9 ＜ 20 ＜ 0.5 ＜ 0.1 7.6 Cha Cha 0.12
Umsebenzi Oyinhloko We-Mica Yokwenziwa
I-Mica powder yokwenziwa nayo ingasetshenziswa njengesengezo ekukhiqizeni izinto zokusetshenziswa zepulasitiki ukwenza amaplastiki ezonjiniyela anamandla amakhulu, ukuqina okuhle nesisindo esincane. Kungakhuphula ubulukhuni, kunciphise ukushisa, kunciphise ukulingana kokunwetshwa okushisayo, kunciphise ukugqokwa ne-asidi kanye nokumelana kwe-alkali kwezinhlanganisela. Yi-polymer enokuncintisana kakhulu, engasetshenziswa ezimotweni, ezindizeni, embonini yezokuvikela kazwelonke nakweminye imikhakha ebalulekile, futhi ingashintsha izinto zensimbi.
I-Mica yokwenziwa iyinto ye-hydrophilic non-metallic, ngakho-ke inokuhambisana okungalungile nama-substrates amaningi we-organic, azothinta ngqo ikhwalithi nokusebenza kwemikhiqizo ehlobene. Ngakho-ke, kuyadingeka kaningi ukuguqula ingaphezulu le-mica yokwenziwa.
Ngokusho kokulungiswa okuhlukile, ukuguqulwa kobuso be-mica powder okuhlukanisiwe kungahlukaniswa kube ukuguqulwa kobuso bomhlaba nokuguqulwa komhlaba okungajwayelekile. Njengokugcwalisa okugcizelelayo, okwenziwe nge-mica powder okushintshwe yi-organic surface kusetshenziswa kakhulu ezintweni ze-polymer ezifana ne-polyolefin, i-polyamide ne-polyester, ukuze kuthuthukiswe ukuhambisana kwayo ne-polymer matrix futhi kuthuthukise ukusebenza kwayo kokusebenza. ama-ejenti wokuxhuma asetshenziswa kakhulu, uwoyela we-silicone nezinye izinto zokuguqula izinto eziphilayo. I-mica powder yokwenziwa eguqulwe yindawo engajwayelekile isetshenziswa kakhulu emkhakheni we-pearlescent pigments, inhloso ukunikeza okwenziwe nge-mica powder umphumela omuhle wokubuka nokubuka, ukwenza umkhiqizo ube nombala futhi ube muhle, ukuze kuthuthukiswe ukusebenza kwesicelo se-mica impuphu. I-Titanium oxide nosawoti wayo kuvame ukusetshenziswa njengezinguquko.
Langaphambilini I-Phlogopite mica powder
Olandelayo: Umhlabathi omanzi we-mica powder
Zokwenziwa Fluorphlogopite Mica
Zokwenziwa Mica Flake
Zokwenziwa Mica Makeup